कांग्रेसमा नयाँ सोचसहितको साझा भावना राख्ने नेतृत्व आवश्यक « Bikas Times
कमला न्यौपाने, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि उम्मेदवार, स्याङ्जा क्षेत्रं नं. २
नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिमा खारिएकी युवा नेतृ हुन् कमला न्यौपाने । स्याङ्जाको गल्याङमा जन्मिएकी न्यौपानेले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नाकोत्तर उत्र्तीण गरेकी छन् । स्वाभिमान र निष्ठाको राजनीतिमा विश्वास गर्ने उनी पार्टीमा विचार र सिद्धान्त खुम्चिँदै गएकोप्रति चिन्तित छिन् । कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनसँग केन्द्रित रहेर युवा नेतृ न्यौपानेसँग कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईंको थातथलो कहाँ हो ?
स्याङ्जा जिल्ला संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २, गल्याङ नगरपालिका वडा नं. ३ मा मेरो घर हो । त्यहाँबाट नेपाली कांग्रेसको वडास्तरको निर्वाचनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि चुनिएकी छु । अहिले केन्द्रीय महाधिवेशनको तयारीमा लागिपरेकी छु ।
स्याङ्जामा कांग्रेस महाधिवेशनको चहलपहल कस्तो छ ?
यतिबेला कांग्रेस १४ औं महाधिवेशनमा होमिएको छ । त्यसले देशैभर कांग्रेसको लहर र चहलपहल बढेको छ । त्यसैगरी स्याङ्जा जिल्लामा पनि कांग्रेसको लहर र चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । जिल्लाका क्षेत्रीय प्रनिधि, नेता, कार्यकर्ता महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छन् ।
क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन हुनुभयो, अब तपाईंको उम्मेदवारी के मा हो ?
म स्याङ्जा जिल्ला संघीय निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार बनेकी छु । क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्दा त्यहाँका क्रियाशील सदस्यहरु, अग्रज नेता, कार्यकर्ताबाट राम्रो साथ, सहयोग र समर्थन पाएकी छु । अब केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि त्यो साथ, सहयोग पाउँछु भन्नेमा विश्वस्त छु ।
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि जित्छु भन्ने लाग्छ ?
जसरी क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्दा त्यहाँका अग्रज नेता, कार्यकर्ताहरुबाट साथ, सहयोग पाएँ । त्यहीं आडमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवारी दिएकी छु । त्यसैगरी उहाँहरुको साथ, सहयोग र समर्थन पाउने छु भन्नेमा विश्वस्त छु । चुनाव भनेको सबैको साथ र समर्थनमा हुने हो । त्यसकारण केन्द्रीय प्रतिनिधि छानिन्छु भन्नेमा ढुक्क छु ।
विद्यार्थी राजनीति कहाँबाट सुरु गर्नुभयो ?
मैले पद्मकन्य क्याम्पस बागबजारबाट नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीति सुरु गरेकी हुँ । पद्मकन्य क्याम्पसमा भर्ना भएपछि नेविसंघमा आबद्ध भएँ । त्यसबाट संघर्ष गर्दै गएर नेविसंघको केन्द्रीय सह–महामन्त्री निर्वाचित हुन भ्याएँ । त्यसपछि विद्यार्थीसाथसाथै पार्टी राजनीतितिर लागिपरेकी छु ।
अब कांग्रेसको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो ?
हो, अब पार्टी राजनीतिमा प्रवेश हुन थालेकी हुँ । नेविसंघमा सह–महामन्त्री निर्वाचित भइयो । अहिले अधिवेशन पनि ढिलाढिला हुन थाल्यो । विद्यार्थी राजनीति पनि पहिला हाम्रो पालामा जस्तो चुस्तदुरुस्त ढंगले अगाडि बढ्न सकेको छैन । अधिवेशन हुन ढिला भएकाले विद्यार्थी राजनीतिमा पहिलाको तुलनामा आकर्षण घट्न थालेको छ ।
महाधिवेशन जितिसकेपछि पनि नेविसंघमा आउनुहुन्छ ?
केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि जितेर पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेपछि नेविसंघमा फकिन्न । पार्टी राजनीतिबाटै अगाडि बढ्ने विचारले महाधिवेशन प्रतिनिधि लडेकी हुँ । अब विद्यार्थी राजनीतिमा फर्किने कुरै हुँदैन । फेरि हामी पुस्तान्तरणको कुरा गरिरहेका छौं । नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनिरहेका छौं । त्यस कारण पनि पार्टी राजनीतिमा पुगिसकेको मान्छे विद्यार्थी राजनीतिमा फर्किनुहुँदैन । नयाँ भाइ, बहिनीहरुलाई मौका दिनुपर्छ ।
तपाईंको उम्मेदवारी महिला कोटाबाट हो ?
कांग्रेसमा विभिन्न जातजाति, समुदायलाई समेटेर महिला कोटाको व्यवस्था गरिएको छ । खुल्ला महिला र खस आर्य पनि छ । तिनैमध्येबाट मेरो उम्मेदवारी रहन्छ । साथीभाइहरुसँग सरसल्लाह हुँदै छ । मेरो उम्मेदवारी खुल्ला महिलाबाट हुन सक्छ । जिल्लामा बसेर पहिलादेखि कांग्रेस राजनीतिमा लाग्नुभएका दिदी, आमाहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग पनि बसेर सरसल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिला नगर, प्रदेश क्षेत्र, जिल्लामा अधिवेशन हुँदैछ । त्यसपछि सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने हो ।
पढाइलाई कहाँ पु¥याएर छोड्नुभयो ?
पढाइको कुरा गर्नुपर्दा मैले राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्र गरी दुईवटा विषयमा डिग्री सकेँ । त्यसपछि पीएडी गर्ने विचारमा छु । त्यसको लागि समय मिलिराखेको छैन । अहिले कांग्रेस महाधिवेशनको चटारो छ । यो सकिएपछि पीएचडीको तयारी थाल्छु ।
तपाईंंहरुले गर्नुभएको लगानीको प्रतिफल कांग्रेसबाट पाउनुहुन्छ ?
पाउनुपर्छ । त्यो शीर्ष नेताहरुको जिम्मेवारी र दायित्व हो । हामीले पनि पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुपर्छ । पार्टीमा लागिपरेका कसैको पनि राजनीति हत्या हुनुहुँदैन। म लगायत धेरै साथीहरुले विभिन्न तहतप्कामा बसेर भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । त्यसको पार्टीबाट उचित मूल्यांकन हुनुपर्छ । हामीले विद्यार्थीकाल देखि अहिलेसम्म पार्टीमा धेरै लगानी गरिसकेका छौं। त्यसको पार्टीले उचित मूल्यांकन गरेर स्थान दिनुपर्छ । हाम्रो भविष्य नै त्यसैमा जोडिएको छ । त्यसकारण पार्टीले सही मूल्यांकन गर्नुपर्छ । त्यो पार्टी नेतृत्वको दायित्वभित्रको विषय हो ।
भनेको बेलामा भ्रातृ, मातृ, सुभेच्छुक संस्थाको अधिवेशन हुँदैन अनि नयाँ पुस्ता यो पार्टीमा के पाउँछु भनेर लाग्छन् त ?
सशस्त्र विद्रोहहुँदै २०६२/६३ जनआन्दोलनले गर्दा ती संस्थाहरुको अधिवेशन अलमलियो । समयमा हुन सकेन मनोनितको भरमा चलाइयो । अहिले माउ पार्टीको अधिवेशन हुन लागेको छ । भ्रातृ, सुभेच्छेक संस्थाहरुको अधिवेशन हुन सकेको छैन । तर, ढिला हुँदैमा नयाँ पुस्ताले केही नपाउने भन्ने हुँदैन । नेपाली कांग्रेस पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी हो । त्यसभित्र सबै जातजाति, बर्ग, समुदायको अपेक्षा छ ।
त्यसको परिपूर्तिको लागि पार्टीले ती सबैको भावना, चाहना, अपेक्षाको सम्वोधन गर्नेगरी आफ्नो विधानमा व्यवस्था गरेको छ । सबै भ्रातृ, मातृ, शुभेच्छुक संस्थाहरुको अधिवेशन हुन ढिला भयो भन्दैमा त्यसमा आबद्ध साथीहरु केही नपाउने भो भनेर चिन्तित हुनुपर्दैन ।
कांग्रेसमा युवाको कुरा उठिरहँदा नेताहरु पुरानै सोच र शैलीमा देखिन्छ नि ?
समय अनुसार परिवर्तन स्वीकार्न नसक्नु अग्रजहरुको कमजोरी हो । उहाँहरु हिजो निरंकुश राणा शासन अथवा एकदलीय पञ्चायती शासनसँग जसरी लडेर आउनुभयो । आज पनि त्यहिं सोच र शैलीमा रुमलिइरहनुद भएको छ । उहाँहरुले एक्कासौं शताब्दीका युवाको भावना, चाहना र सोच, विचार बुझेर परिवर्तन हुन जरुरी छ ।
उहाँहरुले ‘म पहिला लडभीड गरेको सिनियर नेता हुँ’ भनेर पार्टीलाई पुरानो शैलीमा खुम्च्याएर राख्नुहुँदैन । उहाँहरुले आपूmअनुकूल चल्नेलाई मात्रै प्रवेश दिने बाउन्ड्री बनाउनुभएको छ । त्यो गलत हो, त्यसरी पार्टी चलायमान हुँदैन । पार्टीलाई युवाहरुको आकर्षणको केन्द्र बनाउन पुराना शैलीलाई नेतृत्वले परिवर्तन गर्नुपर्छ ।
त्यो खालको सोच कांग्रेस नेताहरुमा छ त ?
त्यस्तो सोच र भावना भएका नेताहरु हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुले व्यवहारमा कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने दृष्टिकोण मात्रै फरक हो । पार्टीलाई सबैको आशा, भरोस र विश्वासको केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ नेताहरुमा छ । व्यक्तिगत रुपमा स्वीकार्न नसक्नु समस्याको विषय हो । समयको माग अनुसार उहाँहरुले सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेको आवश्यकताको शीर्ष नेताहरुलाई राम्रो ज्ञान छ ।
कांग्रेसमा युवा नेतृत्वको सम्भावना कत्तिको छ जस्तो लाग्छ ?
नेपाली कांग्रेसमा युवा आगमनको मार्ग प्रशस्त भइसकेको छ। पार्टीको महामन्त्रीमा त धेरै जना युवा नेताहरुबाट उम्मेदवारी घोषणै भइसक्यो । सभापतिमा पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरु धेरैले घोषणा गरिरहनुभएको छ । यसले पनि युवाहरुको सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले राजनीतिमा सम्भावनै छैन भन्न मिल्दैन ।
अहिलेका युवाहरुमा चाहना गरेपछि पाइहाल्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसमा ढिलासुस्ती भएको छ । तर, उनीहरुको इच्छा, आकांक्षा परिपूर्ति नै नहुने भन्ने होइन । उहाँहरुको चाहनाको सम्बोधन हुन्छ । कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको नाममा
विवाद हुनुको कारण के जस्तो लाग्छ?
नेपाली कांग्रेस अथाह सम्भावना बोकेको डेमोक्रेसीको सागर हो । त्यो सागरमा धेरै नदी, खोला, झरना र मूलको संगम हुन्छ । यहाँ विभिन्न जातजाति, वर्ग, समुदायहरुलाई समेट्नुपर्ने छ । त्यसमा जनजाति, दलित, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, मधेसी, मुस्लिम, थारुलगायत तमाम जाति, वर्ग, समुदायलाई समेट्नुपर्ने भएकाले पनि केही जिल्लामा विवादहरु आएका छन् ।
ठूलो परिवार भएपछि अलिअलि विवाद स्वभाविक हो । फेरि हामी स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनको संघारमा आइपुगेका छौं । त्यसलाई मध्येनजर गरेर सबै वर्ग, समुदायलाई पार्टीमा समेटेर लानुपर्ने छ । त्यो भएर पनि केही ढिलासुस्ती भएको हुन सक्छ ।
यतिलामो विवादको चुरो चाहीं के होला ?
यसको ठ्याक्कै चुरो कुरा चाहीं अहिले नेपाली कांग्रेसमा राप्रपालगायत अन्य पार्टीहरु पनि मर्ज भएर आएका छन् । त्यसरी पार्टी मिलाएर नेताहरु प्रवेश गरेर आउँदा अन्य सदस्यहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा बढी विवाद देखिएको जस्तो लाग्छ । सिंगै पार्टी मर्ज भएर आउँदा त्यहाँका सदस्यहरुलाई कुन तहमा मिलाउने भन्नेमा अलिकति विवाद देखिएको छ ।
जस्तो ५८ जिल्लामा त निर्विवाद सम्पन्न भएको छ । मर्ज भएर आएका केही ठाउँमा विवाद देखिएको हो । फेरि सबै विवाद चाहीं पार्टी मर्ज भएर आउनेहरुको मात्रै हो भन्ने पनि होइन । अलि बढी त्यस्तो ठाउँमा छ त्यो बाहेक अन्य जिल्लामा अलिअलि विवादहरु छन् । फेरि कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा वाद, विवाद, बहस, छलफल, सहमति, असहमति हुन्छ । त्यसैबाट राम्रो निष्कर्ष निस्कने हो । त्यो पनि अब विस्तारै समाधान हुँदै गएको छ ।
नेपाली कांग्रेसप्रति जनआकर्षण किन बढेरको हो ?
अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसप्रति आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक हो । जहिले पनि देशलाई अप्ठ्यारो परेको बेला कांग्रेसले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । त्यो चाहे माओवादी द्वन्द्वबाट मुलुकलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा होस् अथवा संविधान निर्माण र घोषणा गर्दा होस्। ती कामहरु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सफल भए ।
संविधान निर्माणपछि देशमा कम्युनिस्ट सरकार बन्यो । त्यसबेला जनताले धेरै दुःख र हन्डर खेप्नुप¥यो । उनीहरुको दुई तिहाई हाराहारीको बहुमत थियो । तर, उनीहरुले जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेनन् । सरकार पनि पुरा समय चलाउन सकेनन् । घुमिफिरी कांग्रेसकै नेतृत्वमा देश आइपुपुग्यो । त्यसकारण कांग्रेसप्रति आकर्षण बढेको हो ।
कांग्रेस नेताहरुमा जनताको आकर्षण थेग्न सक्ने क्षमता देखिएन नि ?
नेताहरुमा क्षमतै नभएको भन्न त मिल्दैन । उहाँहरुले त्यो क्षमता राख्नुहुन्छ । यहीं पार्टीमा लागेर वर्षौं जेल, नेल भोग्नुभएका, खाइनखाइ संगठनमा जुटेका धेरै शीर्ष नेताहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुका पनि आ–आफ्नै विचार, भावना, सिद्धान्तहरु छन् । ती विचार, भावनालाई एकठाउँमा ल्याउन खोज्दा विवाद जस्तो देखिएको हो ।
सबैका सोच, विचार, भावनालाई समेन्ट खोज्दा थोरै ढिलासुस्ती भएको हो । बाहिर हल्ला गरिएजति विवाद कांग्रेसमा छैन । लोकतान्त्रिक पार्टीमा त्यसलाई ठूलो ठान्नु हुँदैन ।
तपाईंंसँग महिलाहरुको लागि कस्तो योजना छ ?
म महिलातर्पmबाट उम्मेदवार बनिरहँदा पक्कै पनि जिल्लावासी महिलाको चाहना, भावना र आवश्यकताको सम्वोधन गर्नुपर्छ । त्यसको लागि उहाँहरुलाई सीपमुलक तालिमद्वारा अभिप्रेरित गरेर उद्यमशीलता बनाउन पहल गर्ने छु । अधिकारका लागि चेतनामूल कार्यक्रम मार्फत सुसुचित गर्ने छु ।
विभिन्न क्षेत्रमा महिला सहभागिताको लागि जाति, जनजाति, वर्ग, समुदायलाई समावेसी सहभागिताको आवाज बुलन्द गर्ने छु । रोजगारीका लागि विदेसिन वाध्य युवाहरुको सीप, क्षमता अभिवृद्धि गरी स्वदेशमै स्वरोजगार बन्न अभिप्रेरित गर्ने छु । त्यसको लागि केन्द्रसँग पहलकदमी गर्ने छु । खासगरी अहिले देशभर महिला अधिकारको लागि सशक्तिकरण जागरण अभियानको खाँचो छ । त्यसको लागि मेरो भूमिका रहने छ ।